Museveni oo sheegay in Baarlamanka Soomaaliya ay dalka u abuureen is bedelo siyaasadeed – Radio Daljir
Museveni oo sheegay in Baarlamanka Soomaaliya ay dalka u abuureen is bedelo siyaasadeed
Agoosto 18, 2013 3:03 b 0
Kampala, August 18, 2013 – Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari ayaa xalayto xaruunta madaxtooyada Uganda wuxuu kulan kula qaatay madaxweynaha dalkaas Yoweri Museveni, labbada masuul ayaa ka wada hadlay arimo badan.
Madaxweynaha dalka Uganda ayaa kulankaas kadib wuxuu sheegay in Baarlamanka Soomaaliya ay kaalinta koowaad ka yihiin is bedelka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya, wuxuu sheegay in baarlamankan uu aad uga duwan yahay kuwii hore ee KMG ahaa.
Wuxuu ku cel-celiyey in Baarlamanku ay horumar ka sameeyeen dhanka la socodka xaalada dalka iyo shaqooyinka wadanka ka socda, iyo is bedelka dalka ka jira mudadii sanadka ahayd ee ay jirtay dowladda uu Madaxweynaha ka yahay Xasan sheikh Maxamuud, Museveni wuxuu soo dhoweeyey heshiiskii lagu mataaneeyey labbada Baarlaman ee Uganda iyo Soomaaliya.
Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya ayaa isna kulanka ka hadlay, wuxuuna Uganda uga mahadceliyey dadaalka dhanka ciidanka ah ee ay la garab joogaan dowladda Soomaaliya, iyo tababarada la siin doono Baarlamanka Soomaaliya.
Prof. Jawaari wuxuu xusay in Heshiiska mataaneynta uu dhigayo in Uganda ay tababar siiso shaqaalaha iyo xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, diyaarinta warbixinnada, qaabka sameynta doodaha iyo raacidda shuruucda Baarlamanka.
Afhayeenka Baarlamanka Uganda Rebecca Kadaga waxay sheegtay in ay ku faraxsan yihiin qorshaha heshiiska ah ee ay gaareen labbada Baarlaman, waxay sheegtay Kadaga in ay guul tahay in ay gacan weyn ka geystaan dowlad yeelashada Soomaaliya hadii ay noqon lahayd dhan ciidan iyo dhan siyaasadeed intaba.
Waxgaradka Cayn oo shaaciyey in aysan saxiixi doonin xilibaanada loo qorayo Puntland (Dhegeyso)